Tonga amin'ny Free Hardware ny mpanampy Google noho ny SDK | Fitaovana maimaim-poana
Inona ny Arduino?
Tonga ao amin'ny Free Hardware i Google Assistant noho ny SDK-ny
Joaquin Garcia Cobo | | General
Tamin'ny herinandro lasa izahay dia nahalala vaovao mahaliana ho an'ireo olona tia ny Free Hardware, ny fisianà mpanampy virtoaly iray izay afaka namorona isika misaotra ny birao Raspberry Pi sy ny lozisialy Google.
Izany dia nahatonga ny magazine MagPi ho lany tahiry, nefa koa nisy vokany tsara kokoa ho an'ny tontolon'ny Free Hardware. Nahavita ny asan'i Google misy SDK noforonina miaraka amin'ny Google Assistant.
Betsaka aminareo no hanontany Inona no atao hoe SDK? Azontsika atao ny mamaritra ny SDK ho kit fampandrosoana ny lozisialy. Amin'ity tranga ity, ny Google Assistant SDK dia kit fampandrosoana ho an'ny mpanampy Google.
Kit izay tsy ahafahantsika mamorona rindranasa miasa miaraka amin'ity rindrambaiko ity, fa afaka mampiasa azy io amin'ny sehatra hafa noho Raspberry Pi. Noho izany Google Assistant dia ho tonga amin'ny Odroid, Orange Pi na BeagleBone Black ankoatry ny hafa.
Azontsika atao ihany koa ny manamboatra tabilao toy ny Arduino mifandray amin'ity mpanampy virtoaly ity ary mampiasa azy io mihitsy aza. Noho izany dia mila mankany fotsiny isika ny pejy ofisialy SDK ary ampidino aminay. Dingana haingana sy maimaim-poana ho an'ny rehetra.
Este SDK dia miasa miaraka amin'i Python, noho izany dia mila ny fitaovana enti-miady resahina isika mba hifanaraka amin'ity fiteny fandaharana ity, zavatra iray izay eken'ny ankamaroan'ny tabilao tanteraka. Maimaimpoana ny fampiasana ny Google Assistant ary ity SDK ity fa raha te hampiasa azy ara-barotra isika dia mila miresaka amin'i Google vao afaka manao izany.
Manaraka i Google ny dingana mitovy nataon'i Amazon tamin'i Alexa, zavatra mahasoa ny mpampiasa Hardware Gratis, fa ny Google Assistant sy Alexa tsy ireo mpanampy virtoaly "afaka" azontsika hananana ny Hardware. Na dia tsy maintsy ekena aza fa raha izy ireo no mpanampy virtoaly mora ampiasaina indrindra Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » General » Tonga ao amin'ny Free Hardware i Google Assistant noho ny SDK-ny
miguelgaton dia hoy izy:
Somary mampatahotra ity Mpanampy Google ity, sa tsy izany?
Mamaly an'i miguelgaton
Siemens dia mitondra fanontana 3D amin'ny fanamboarana lalamby
Miara-miasa amin'ny Raspberry Pi i Google handefa Virtual Assistant
Raiso ny lahatsoratra farany amin'ny Hardware.